Ọmụmụ ihe na Germany juputara na Nkuzi 2021 Ngwa Mpempe Akwụkwọ: Akwụkwọ Akụkọ Currentlọ Akwụkwọ Ugbu a
Ọmụmụ ihe na Germany juputara na Scholarship 2021 Application Form Portal
Ọmụmụ ihe na Germany Enyocha Ego zuru ezu: Na Germany, agụmakwụkwọ na-adị mfe. Enwere scholarships nke na-eme ka nke a kwe omume. Ọzọkwa, ụfọdụ n'ime agụmakwụkwọ ndị a na-eji nchịkọta dị ịtụnanya.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụtakwu banyere ndị a scholarships, attentionaa ntị n'ihe ọmụma dị n'isiokwu a. N'isiokwu a, ị ga-amụta ebe / etu esi etinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ ndị a.
Ọmụmụ ihe magburu onwe ya na Germany nwetara ego agụmakwụkwọ zuru oke maka 2021
Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ọmụmụ na Germany zuru ezu kwụrụ ụgwọ agụmakwụkwọ:
1. Mmụta DAAD na Germany maka Mmụta Postgraduate Post metụtara mmepe
Nke a bụ otu n'ime ọmụmụ ihe na Germany zuru oke ego mfọn. Ọzọkwa, ọ na-ekpuchi ma Nna-ukwu na PhD Degree. Ndi German German Academic Exchange Service (DAAD) nyere ya.
Ọzọkwa, ọ na-enye ndị gụsịrị akwụkwọ si mba ọzọ na mmepe na mba ndị mepere emepe nnukwu ohere. Ọzọkwa, ọ na-ekpuchi ọzụzụ niile. Ọ na-enyere ndị mba ọzọ aka ndị gụsịrị akwụkwọ were postgraduate ma obu Nzere masta na steeti ma ọ bụ steeti-amata Mahadum German.
Ọzọkwa, na ahụkebe ikpe, na-enyere ha aka iji a doctoral ogo. Na inweta asambodo mahadum (Master / PhD) na Germany. Agbanyeghị, ọ na-elekwasị anya ndị ọkachamara na-eto eto si mba ndị na-emepe emepe.
Award Ọnụ ego: The scholarships na-agụnye ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa nke euro 850 maka ndị gụsịrị akwụkwọ. Na 1,200 Euro maka ndị gụrụ akwụkwọ na doctoral.
chọrọ: Onye anamachọ ihe aghaghi agha oru ma obu onye ochichi ma obu ndi ulo oru ma obu nke ulo oru nke obodo na emepe emepe. Ọzọkwa, ga-enwerịrị akara ugo mmụta bachelọ. Ga-enwerịrị akara agụmakwụkwọ na oke nsonaazụ dị elu. Ọzọkwa, ogo mmụta agụmakwụkwọ ya ekwesịghị ịbụ ihe karịrị afọ 6.
imecha: Ọgọst-Ọktọba, 2021.
ngwa: PỊA EBE A
2. KAAD Scholarships na Germany maka mba ndị na-emepe emepe
A na-agwa KAAD scholarships ka nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ. Ọzọkwa, ha agaala mahadum nke nwetagoro ahụmịhe ọkachamara. Na ndị nwere mmasị na postgraduate ọmụmụ na Germany.
Ọzọkwa, ọ dị mkpa iburu n'uche na agụmakwụkwọ a bụ maka ụmụ amaala nke mba ndị ahọpụtara emepe ma ọ bụ mba ndị ahọpụtara n'Africa. Ọzọkwa, ndị nọ na Asia, Middle East ma ọ bụ Latin America. Agbanyeghị, enwere mmasị maka ndị na-achọ Katọlik. Agbanyeghị, ịnwere ike ịga na njikọ dị n'okpuru maka nkọwa ndị ọzọ.
Award Ọnụ ego: Ekwughi. Agbanyeghị, ịnwere ike itinye njikọ n'okpuru maka nkọwa.
chọrọ: Ndị anamachọ maka Master-scholarships kwesịrị ịbụ nke kachasị dị afọ 30. Ọ bụ ezie na ndị na-achọ maka PhD-scholarships ekwesịghị ịbụ okenye karịa 35. Ọzọkwa, onye anamachọ ga-esite na mba na-emepe emepe ma ọ bụ na-apụta n'Africa, Asia, Middle East ma ọ bụ Latin America. Ga-enwerịrị akara mmụta mahadum.
imecha:15 Jenụwarị / 30 June nke afọ ọ bụla.
3. Finduddannelse.dk nkwado akwụkwọ
Nke a bụ agụmakwụkwọ enyere Finduddannelse DK. Nakwa nke a bụ otu n'ime ọmụmụ ihe na Germany na enweta ego zuru ezu. Na finduddannelse.dk ọ kwenyere na ụmụ akwụkwọ nke oge a, site na nyocha na ntinye ọrụ n'ọdịnihu nwere ike inye aka ịkpụzi ụwa nke echi n'ụzọ dị mma.
Yabụ, mkpa maka inye onyinye mmụta ruru € 5000 dị mkpa. Ma ọ bụ iji nyere aka kpuchie ụgwọ ụlọ akwụkwọ na ime ka nwa akwụkwọ ahụ nwee ike ịbịaru nso, na-atụ anya, ọrụ na-agbanwe ụwa.
Ọzọkwa, a ga-enye onyinye mmụta maka afọ mgbụsị akwụkwọ / mgbụsị akwụkwọ nke 2021. A na-emeghere ndị mmadụ si n'akụkụ ọ bụla ụwa chọrọ ịmụ a usoro nnabata nke ahụ bụ ihe enyemaka iji mee ka ụwa kwagide.
Award Ọnụ ego: € 5000.
chọrọ: Onye anamachọ ihe aghaghi itinye akwukwo (ma obu tinye) ihe omume nna ukwu nke nwere ike inyere ya aka ime ka uwa di nma. Ọzọkwa, ga-etinyerịrị (ma ọ bụ ga-etinye akwụkwọ) maka ọmụmụ malite na Fall Semester 2021. Jide ezigbo akara asambodo.
imecha: 12 April, 2021.
4. IELTS Ule akwukwo ugwo akwukwo
Asambodo IELTS nwere ikike imeghe uzo ozo maka umu akwukwo mba uwa. Ọzọkwa, yana ịkwalite ụlọ ọrụ.
Ọzọkwa, n'otu atụmatụ, ihe dị ka nde ụmụ akwụkwọ 5 pụtara maka ule IELTS sitere na mba 140 kwa afọ.
Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nwere ọgụgụ isi nwere ike ihichapụ ule IELTS a na akara ule dị mma. Agbanyeghị, n'ihi nsogbu akụ na ụba ụmụ akwụkwọ ahụ kwụsịrị ịle ule IELTS. N'ihi ya, agụmakwụkwọ a dị mkpa ka ọ na-akwado ụgwọ ụgwọ ule nke IELTS.
Award Ọnụ ego: Ekwetaghị.
chọrọ: Onye anamachọ ihe gha aghaghi iru afo iri abuo na abuo. Ọzọkwa, ga-ekpochapụla ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ dịkarịa ala akara 32%. Ọzọkwa, ọ ga-abụrịrị na ejirila 75 GPA kpochapụ ihe ọmụmụ gụsịrị akwụkwọ. Agbanyeghị, ịnwere ike ị nweta nkọwa ndị ọzọ site na njikọ njikọ dị n'okpuru.
imecha: 30 Ọgọst, 2021.
5. 2021 Essay Scholarships for Undergraduate Mmụta
Ọzọkwa, nke a bụ otu n'ime ọmụmụ ihe na Germany zuru oke agụmakwụkwọ. Ọzọkwa, agụmakwụkwọ a na-enye ụmụ akwụkwọ tozuru etozu ohere iji merie otu $ 500 - $ 1500 agụmakwụkwọ.
Agbanyeghị, nke a bụ mbọ iji nyere aka na ọnụ ahịa agụmakwụkwọ ga-aga n'ihu. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịnweta nkọwa ndị ọzọ site na njikọ njikọ dị n'okpuru.
Award Ọnụ ego: Opekempe nke $ 500.
chọrọ: Onye anamachọ ihe aghaghi ibu nwa akwukwo nke ulo akwukwo di elu. Ọzọkwa, ma ọ bụ nwa akwụkwọ kọleji, gụnyere ndị na-agụghị akwụkwọ na ndị gụsịrị akwụkwọ.
imecha: 30 October, 2021.
6. The Katoni scholarship - Na-akwado ọrụ ọdịnala
Ọzọkwa, nke a bụ otu n'ime ọmụmụ ihe na Germany zuru oke agụmakwụkwọ. Ọ bụkwa Katoni na-enye ya. Ọzọkwa, a na-enye ya otu onye ma ọ bụ karịa mmadụ kwa afọ ndị chọrọ nkwado ego maka agụmakwụkwọ, ọrụ ma ọ bụ ọrụ ha na mpaghara ọdịnala.
Ọzọkwa, ebumnuche nke agụmakwụkwọ bụ ịkwado ndị Denmark na ndị mba ọzọ na-arụ ọrụ karịsịa iji wusie ọdịbendị na Denmark na gafee oke ala.
Na mgbakwunye, e nyere ya ndị nyocha. Na umu akwukwo n’uwa nile. Omenala gunyere, mmekorita, asusu, ejiji, nka, omenaala, wdg.
Award Ọnụ ego: $ 10,000
chọrọ: Onye anamachọ ihe aghaghi ibu onye nyocha. Ọzọkwa, ga-abụrịrị ụmụ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ mbụ na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ.
imecha: 1 Mee, 2021.
7. Edemede Asọmpi Edemede 2021
Ọzọkwa, nke a bụ otu n'ime ọmụmụ ihe na Germany zuru oke agụmakwụkwọ. Otu ebumnuche bụ ịkpali ụmụ akwụkwọ imeziwanye nka ederede ha na omume na ịme akwụkwọ na-aga nke ọma.
Yabụ, dị ka nwa akwụkwọ, ịnwere ike ịnabata ihe ịma aka ma sonye na asọmpi edemede agụmakwụkwọ. A ga-enwe ndị mmeri atọ. Ndi mmadu ato a ga - enweta ego.
Ọzọkwa, a ga-ebipụta akwụkwọ kacha mma na weebụsaịtị agụmakwụkwọ. Na soshal midia. Agbanyeghị, nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na onye dere akwụkwọ nyere ikike.
Award Ọnụ ego: $ 2,000
chọrọ: Onye na-etinye aka ga-abụ onye gụsịrị akwụkwọ ma ọ bụ onye na-agụghị akwụkwọ. Ọzọkwa, enweghị oke na afọ, agbụrụ, ma ọ bụ okike. Agbanyeghị, nweere onwe gị ịga njikọ njikọ dị n'okpuru maka nkọwa ndị ọzọ.
imecha: 31 Mee, 2021.
8. Nkuzi akwukwo maka ndi kachasi amara - Mahadum Kozminski
A raara akwukwo akwukwo a nye ndi nile choro itinye aka na ulo akwukwo nke Kozminski. Ọzọkwa, ọ bụ agụmakwụkwọ nke Mahadum Kozminski.
Ọzọkwa, ọ bụ otu n'ime ọmụmụ ihe na Germany zuru oke agụmakwụkwọ. Agbanyeghị, maka ama ndị ọzọ gbasara agụmakwụkwọ a, gaa na njikọ njikọ dị n'okpuru.
Award Ọnụ ego: 56% nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị - Ihe nhata 7500 PLN.
chọrọ: Gaa na njikọ njikọ dị n'okpuru maka ozi a.
imecha: 15 July 2021.
9. Manchester oge zuru ezu MBA Scholarships
Kwa afọ agụmakwụkwọ a na-akwado ndị nwere ọgụgụ isi MBA kacha nwee amamihe. Ọzọkwa, ọ na-enye ndị kachasị nwee amamihe ohere iji rite uru na ahụmịhe Manchester MBA.
Ọzọkwa, biko rịba ama. Ọ bụ otu n'ime ọmụmụ ihe na Germany na enweta ego zuru ezu. Agbanyeghị, maka ama ndị ọzọ gbasara agụmakwụkwọ a, gaa na njikọ njikọ dị n'okpuru.
Award Ọnụ ego: £ 10,000 - £ 44,000.
chọrọ: Onye anamachọ ihe agha gha inwe ezigbo nzere omumu. Ọzọkwa, ga-enwerịrị ndekọ ndekọ egwu ọkachamara. Na nkwukọrịta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọzọkwa, ga-enwerịrị ụkpụrụ na ụkpụrụ omume siri ike. Na ikike ịghọ onye isi azụmaahịa ma ọ bụ ọchụnta ego pụtara ìhè na onye nnọchi anya ụlọ akwụkwọ n'ọdịnihu.
imecha: 1 Juun, 2021.
10. EUSP Sikolashịrị maka Studentsmụ Akwụkwọ Nwere Mmụọ na Europe
EUSP Scholarship Mmemme bụ maka ụmụ akwụkwọ mba na ụlọ. Ọzọkwa, kwa afọ, a na-enye otu ụmụ akwụkwọ nwere ọgụgụ isi dị elu nke nwere ọgụgụ isi mmụta dị mkpa.
Nke a bụ akụkụ nke Mmemme Ndị Ọzụzụ EUSP iji gaa [agụmakwụkwọ ọdụ ụgbọ mmiri. Maka ọtụtụ onyinye, EUSP na-ele naanị mmezu agụmakwụkwọ.
Award Ọnụ ego: 1000 ruo ,15,000 XNUMX kwa afọ.
chọrọ: Ndị na-achọ ọrụ ga-abụ nwa akwụkwọ oge niile. Ekwesịrị ịdebanye aha na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ a nabatara na Europe. Ọzọkwa, ga-enwerịrị kọleji GPA kachasị elu nke 3.0.
imecha: 30 November, 2021.
Ihe a dị n’elu bụ ụfọdụ n’ime ihe ịtụnanya scholarships na Germany. Mee nke ọma itinye. Agbanyeghị, tupu itinye, rịba ama. Jide n'aka na ị mezuru ihe ndị a chọrọ.
Ọzọkwa, ọ dị mkpa na ị ga-ewere oke ntozu oke oke. Nke a bụ n'ihi na, ị nwere ike iru eru ma ọ bụrụ na ị na-eleghara ha anya. Ọzọkwa, nweere onwe gị ịga na ibe weebụ a maka mmelite dị ka nke a. Jisie ike
Nlekọta Ugbo ala Dreamfield 2017 | Ntuziaka Ngwa na Ngwa
Comparative Evaluation nke Antibody Production Na Broilers acgba ọgwụ mgbochi ọrịa Newcastle Ọrịa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na Kano Metropolis, Nigeria
AfriHUB Nigeria Limited Recrutment 2020/2021 Portal Updates Ntinye
Steeti nke Washington Hiring Usoro 2019 na Nlekọta Ọrụ Nduzi chọrọ
Glọ Akwụkwọ Gerald's Hospital nke Nursing School Fees 2020/2021 Oge Ndozi
Ntinye ntinye nke Henkel Nigeria 2020 | www.edemede.com
Egbula JAMB 2021? Hụ Akụkọ kacha ọhụrụ banyere JAMB
« Banyere Applicationlọ Ọrụ Banyere Worldwa Banyere Ihe Ntuziaka 2021 na Oge Ọgwụgwụ
Ihe Ngwuputa Ngwuputa 17 kacha mma zuru ezu 2021/2022 mmelite Portal »